အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: June 2008
ဘ၀တကွေ့မေ့ မရတဲ့တနေ့ ..
စူးစပ်တဲ့ မျက်လုံး ခေတ္တအမှောင်ဖုံး..
ဘုရားကယ်ပါ.. အမေရယ် ကယ်ပါ..
ပွန်းပဲ့ စုတ်. လက်ဖ၀ါး
တွေ့ ရတဲ့ ဆာလာအိတ်ခွံကလေး..
မလုံတလုံ ဖုံးနိူင်သေးတာ ၀မ်းသာစရာ။
ကျနော် ဂါဝန်ဝတ်နဲ့ ကိုလူပျို..
ဘ၀ရဲ့ အပျော်ဆုံးနေ့ ကလေးပေါ့။
မျိုးချစ်မြန်မာ.၏ ဂါဝန်ဝတ်ထားသော ယောက်ျားလေးတဦး ၏ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ရှုခံစားထားပါသည်။ အမှန်ဖြစ်ရပ်ကို ပြသသော ဤသတင်း အတွက် မောင်လေးမျိုးချစ်မြန်မာအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:43 AM0comments Links to this post
ရှင်ကွဲ ကွဲခြင်း၏ ဝေဒနာ
မပေးရင် "ထောင်"၊ ပေးရင် "ပြောင်" ပေါ့
ကျွန်မမှာ ပိုင်ဆိုင်တာ ခလောက်ကလေးတလုံး
ဘဝမှာ နောက်ဆုံးတွေ့ တာ
ကျွန်မတို့ဘ၀ တူတူ လှည်းဆွဲ
ပြန်တွေ့ ရန် ခက်ခဲတဲ့..ကိုညိုပြာ
ရွေ့ ပြောင်း..အဓမ္မ ပေါ်တာဆွဲ..
ကျွန်မ တို့ပေါင်းလောင်းကကျွဲလည်း..
မသဒ္ဓါ ( ၆။၂၆။ ၂၀၀၈)
နအဖ၏ အဓမ္မ.အကြမ်းဖက်၍ ခေါ်ယူလာသော ရွေ့ ပြောင်းဒေသများမှ..ကျွဲနွားများသို့စာနာစွာဖြင့်..အမှတ်တရ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:07 AM0comments Links to this post
မှန်ကန်သူ အမည် ပန်းလိုမွေး
သမိုင်းရဲ့ စာမျက်နှာများ အထင်ရှား..
အားမငယ်နဲ့ညီမလေး
မသဒ္ဓါ ( ၆။၂၅။၂၀၀၈)
ညီမလေး..မသက်ဇင် http://mathetzin.blogspot.com/ သို့ 
cbox မှာ..မိကောင်းဖခင်သားသမီးမပီသစွာ..လာလာဆဲနေတာ..မမတို့ လည်း အကြိမ်ကြိမ်..ခံရဖူးပါတယ်.။ အမှန်ကိုဆိုတဲ့အခါ..လက်မခံနိူင်တဲ့ ရေပေါ်ဆီတွေက..ဆတ်ဆတ်ထိမခံ...ခါးတာအမှန်ပါဘဲ..အနာပေါ် တုတ်ကျတာပေါ့ ။ ဗမာ ယောက်ျားရင့်မကြီးတွေထဲက ပညာတတ်မိန်းမတွေ အပေါ် နှိမ်ချကြည့်ချင်တဲ့ လူတွေပေါ့။
ဆဲတာလည်းအမှန်ပါဘဲ..ချီိးမွန်းလည်း ခုနှစ်ရက်. ကဲ့ရဲ့လည်း ခုနှစ်ရက်မို့ ..ညီမလေးရေ..ကိုယ်.ထမင်းကိုယ်စား..ကုလားမကြား နားမကြားသာထားလိုက်ပါ..ခွေးလှေးခုန်လို့ ဖုန်မထပါဘူး..ရဲရင့်စွာ..ဆက်လျှောက်ပါညီမ.အားပေးစမ်းပါရစေ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:34 AM0comments Links to this post
ငါစိုက်တဲ့ဆန်တွေ မင်းစား..ငါ့ကျ သူတောင်းစားတဲ့ လား..
အကြောအချင် က သံချောင်း
စပါးလယ်ဧက ၁၀ ပွဲ
ရိုင်းစိုင်း လှတဲ့ သဘာဝရိုင်း.
အိုးအိမ် ကျွဲနွား..လူ့ အသက်များ..
သူသွားချင်တဲ့တက္ကသိုလ်နဲ့ဝေးပြီး.
နှစ် ၃၀ အတူလက်ဆက်တဲ့ ချစ်ဇနီး
ဒီလှိုင်းထဲက သူ့ ရဲ့အော်သံ
ကျုပ်နဲ့ ၅နှစ်သား. သားလေး...
ဆန်ကလေး နို့ ဆီတစ်ဗူးရအောင်..
ကျန်ရစ်တဲ့ သားအဖ နှစ်ယောက်.
လက်ဖြန့် ခက်။ ခပ်ရှက်ရှက်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:34 AM 1 comments Links to this post
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:31 AM 1 comments Links to this post
တွယ်ရာမဲ့ ..ဆားလေး တစ်ဒယ်..
လေနဲ့ မိုး..မိုးနဲ့ လေ..
သူ့ အတွက်တော့ ကောက်ရိုးမျှင် တခုအလား..
ရွာတွေ က..တစပြင်ချောက်သွေ့ နေ.
၁ဝ နှစ်မပြည့်တဲ့ သား
လတာပြင် နဲ့ဓနိတော..
ရှာတွေ့ တဲ့ ဆားဒယ်ကိုလှေလုပ်..
တက်မရှိ လက်နဲ့ သာလှော်
မတွေ့ တဲ့ မိသားစု..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:07 AM0comments Links to this post